Vegas Moving Isilinganiso Forex Ukuhweba Isu | Forex MT4 Izinkomba
Ikhaya Forex Strategies Vegas Moving Isilinganiso Forex Ukuhweba Isu
Ukuhweba akudingeki kube izinto eziyinkimbinkimbi. Elinye lamaphutha avame kakhulu okwenziwa abathengisi abasha ukuthi bacabanga ukuthi ukuhweba kufanele kube yinkimbinkimbi ukuze kusebenze. Ngakho, babheka isu bese bethola ukuthi amasu alula kakhulu, futhi baqala ukuyithuthukisa ngokwengeziwe bengazi ukuthi sezivele zicindezela ngokweqile izinhlelo zabo zokuhweba. Manje, akukho lutho olungalungile ngecebo eliyinkimbinkimbi. Inkinga ilele ukuthi ngabe ukucubungula okungeziwe kuyakuthuthukisa ukusebenza kwabo. Isikhathi esiningi akunjalo. Kungasebenza nangenye indlela ngokungeza imfuhlumfuhlu eningi kakhulu kumashadi abo, kubangele ukuthi babambe amaqhwa noma nini lapho kuvela ithuba. Umbono wokuthi ukuhweba kufanele kube yinkimbinkimbi ukuze usebenze kukude kakhulu neqiniso. Kwesinye isikhathi ukulula kungcono.
Amasu okuhweba alula avame ukunganakwa. Nokho, kunamasu amaningi okuhweba alula asebenzayo futhi angalanda ama-pips amaningi usuku nosuku. Isu seVegas Moving Average Forex Trading Strategy liyindlela elula yokuhweba engasetshenziswa ngabadayisi abaningi, abaqalayo ngokulinganayo. Naphezu alula, ingahlinzeka ngamasignali wokuhweba anamandla amahle kakhulu okuholela ezinzuzweni ezinkulu.
2 Isilinganiso sokuhambisa se-VAR
4.3 Indlela ukufaka Vegas Moving Isilinganiso Forex Ukuhweba Isu?
Isibonisi semali seVegas siyinkomba yemikhuba yangokwezifiso esiza abahwebi ekuboneni inkombandlela yokuthambekela. Le nkomba isuselwe kuma-Exponential Moving Average amabili (UMAMA), i-EMA enezikhathi ezingama-144 kanye nezikhathi ezingama-169 i-EMA. Lawa ma-EMA asethelwe ukuthambekela kwesikhathi eside, okuwusizo kakhulu kubahwebi abafuna ukuhweba izitayela zesikhathi eside.
Isibonisi semali seVegas sisodwa isu le-crossover. Amaphuzu we-crossover wemigqa emibili ye-EMA akhombisa ukuguqulwa kwesimo sesikhathi eside. Ngokwayo, ukusebenzisa nje lezi zimpawu bekungavele kunikeze okufakiwe okuhle okungaholela ekutholeni ama-pips.
Ngaphandle kwemigqa emibili emaphakathi yokuhamba, inkomba yeMali yaseVegas inezinye izibopho zangaphandle ezifaka imvilophu le mikhakha emibili ehambayo. Le migqa ingasetshenziswa ngabadayisi abaphakathi lapho befuna izimo zemakethe ezedlulele, kanye nabadayisi bomfutho ababheka amasiginali anamandla angavame ukuphuma kulawa mabhande.
Isilinganiso sokuhambisa se-VAR
Isilinganiso sokuhamba se-VAR noma i- "Var Mov Avg" siyisibonisi esimaphakathi esiguquliwe esiguquliwe. Le nkomba inokubalwa okuyinkimbinkimbi ngemuva kwayo, kepha ikwazi ukwenza lula ukwenziwa kwenkomba, ukuvumela noma imuphi umhwebi ukuthi aqonde kalula ukuthi uyisebenzisa kanjani.
Le nkomba isuselwa ku-Adaptive Moving Average (KODWA) kanye nokunye okunye ukulungiswa esimweni esihambayo uqobo. Umugqa wesilinganiso wokuhamba oholelayo uluhlobo olubushelelezi kepha oluphendulayo lomugqa omaphakathi wokuhamba, okuyilokho abahwebi abaningi abangafuna. Inokusalela okuncane uma kuqhathaniswa nezilinganiso eziningi ezihambayo, nokho futhi iyakwazi ukunciphisa izimpawu ezingamanga ezingaba khona.
Isikhombi se-Var Mov Avg sikhombisa nezimpawu zokubuyiselwa emuva kwethrendi kususelwa emthambekeni womugqa ojwayelekile ohambayo. Imboza amachashazi aphuzi kulayini owehlayo phezulu namachashazi e-magenta kulayini owehlayo owehlayo. Lezi zinguquko zombala zingasetshenziswa njengesiginali yokubuyisa umkhuba usebenzisa ithambeka lenkomba ye-Var Mov Avg.
Lelisu lokuhweba lisuselwa kuzimpawu zokubuyiselwa emuva kwethrendi kusetshenziswa inkomba yeMali yeVegas kanye nenkomba yeVar Mov Avg. Izimpawu zisuselwa kuqhinga elilula le-crossover zisebenzisa lezi zinkomba ezimbili zesikhathi eside.
Inkomba yeVar Mov Avg izomela umugqa wesilinganiso sokuhamba wesikhathi eside. Imigqa emibili emaphakathi yesibonakaliso semali se-Vegas, okuluhlaza okotshani nokuhlaza okwesibhakabhaka, izomela imigqa emaphakathi yokuhamba emifushane. Izimpawu zokuhweba bese zibhekwa njengemigqa eluhlaza nokuhlaza okwesibhakabhaka kwesibonakaliso semali seVegas esiwela ulayini onamachashazi weVar Mov Avg.
Intengo kufanele yeqe futhi ivale ngaphezu komugqa we-Var Mov Avg onamachashazi
Inkomba yeVar Mov Avg kufanele iphrinte amachashazi aphuzi kulayini wayo okukhombisa ukuthi umugqa wesilinganiso esihambayo uyehla uye phezulu
Imigqa eluhlaza noluhlaza okwesibhakabhaka yenkomba yeMali yeVegas kufanele yeqe ngaphezu komugqa onamachashazi weVar Mov Avg ekhombisa ukuguqulwa kwesimo se-bullish
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho intengo ivalwa ngaphansi komugqa we-Var Mov Avg
Vala ukuhweba ngokushesha amachashazi kulayini we-Var Mov Avg ashintshela kuma-magenta
Intengo kufanele yeqe futhi ivaleke ngaphansi kolayini we-Var Mov Avg onamachashazi
Inkomba ye-Var Mov Avg kufanele iphrinte amachashazi ama-magenta kulayini wayo okukhombisa ukuthi umugqa wesilinganiso esihambayo wehlela phansi
Imigqa eluhlaza noluhlaza okwesibhakabhaka yenkomba yeMali yeVegas kufanele yeqe ngaphansi komugqa onamachashazi we-Var Mov Avg ekhombisa ukuguqulwa kwethrendi
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho intengo ivalwa ngaphezu komugqa we-Var Mov Avg
Vala ukuhweba ngokushesha amachashazi kulayini we-Var Mov Avg ashintsha abe ophuzi
Noma lula, leli qhinga lokuhweba lingenza inzuzo enkulu kubahwebi. Empeleni, kuba lula kwayo okwenza kube yigugu kakhulu. Kulula ukuthi abathengisi abasha basebenzise futhi balandele. Izimpawu zokuhweba kulula ukuziqonda, nokushintshwa komfutho kukhonjiswa ngokusobala.
Phezu kwalokho, leli qhinga lokuhweba lingelinye elenza izimpawu zokuhweba ezinamathuba amaningi okuholela kuzuzo ezinkulu. Ivumela abathengisi ukuthi babambe umkhuba kusenesikhathi bese bewugibela kuze kube sekupheleni. Lokhu kuvumela abathengisi ukuthi bakhame izinzuzo eziningi kuzo zonke izinto eziguqukayo ezenziwa yizimakethe.
Vegas Moving Isilinganiso Forex Ukuhweba Isu inhlanganisela Metatrader 4 (MT4) inkomba(s) futhi ithempulethi.
I-Vegas Moving Average Forex Trading Strategy inikeza ithuba lokuthola izici ezahlukahlukene kanye namaphethini kumanani wamanani angabonakali ngeso lenyama..
Indlela ukufaka Vegas Moving Isilinganiso Forex Ukuhweba Isu?
Thwebula Vegas Moving Isilinganiso Forex Ukuhweba Isu.zip
Iya kwesokudla ukukhetha Vegas Moving Isilinganiso Forex Ukuhweba Isu
Uzobona Vegas Moving Isilinganiso Forex Ukuhweba Isu iyatholakala kwi Ishadi yakho
Isiqephu esedluleColor RSI X20 Cloud MT5 Indicator
Isiqephu esilandelayoI-Metro Trend Forex Ukuhweba Isu
Forex MT5 Izinkomba4024